May 28, 2020 9212
जाजरकोटमा प्रेमीका लिन गएका नवराजको गाउँलेको लखेटा’ईवाट निधन भयो । नवराजको आमाले युवतीको पेटमा आफ्नो छोरा’को बच्चा रहेको दावी गरेकी छन् ।
उनले छोरा र ति युवतीको कुरा फोनमा भएको सुनेको र त्यतीवेला युवतीले मेरो पेट’मा बच्चा छ, आमा बुवा’ले अन्तै विवाह गरिदिन लागे लिन आउ भनेर भनेको सुनेको नवरा’जको आमाको दावी छ । उनले ति युवतीको पेटमा सांच्चै बच्चा छ भने त्यो आफुलाई चाहिने बताइन् ।
उनले भनिन्, राति १० वजे मेरो छोरालाई फोन आएको थियो, छोराले लाउड स्पिकर अन गरेको थियो । म शौचा’लय जान लागेको बेलामा त्यसो भनेको सुने ।
साँच्चै उनको पे’टमा मेरो छोराको सन्तान छ भने मला’ई चाहिन्छ । छोरा वा छोरी जे भएपनि मलाई मेरो छोरा’को नासो चाहिन्छ । उनले आफ्नो छोरा र साथीहरुको यस्तो अवस्था बना’उनेहरुलाई भने कारवाहीको माग गरेकी छन् ।
उनले ति युवती यस अघि २ पटक बस्न आएको बताइन् । मेरै छोरीको उमेरकी केटीलाई देखेपछि मैले को हो किन आएको हो भनेर सोध्दा युवतीले नै म हजुरको छोराको प्रेमीका हो भनेर भनेको उनले दावी गरिन् । उनले ८ वर्ष पछि आफुहरुले वि’वाह गर्ने योजना बनाएको पनि उनले बताएकी थिइन् ।
उनले त्यस पछि पनि युवतीको भाई एक साता आफ्नो घरमा आएर बसेको पनि उनले बताइन् । उनले शुष्माले आ’फै बोलाएर बिच वाटोमा पुग्दा शुष्माको फोन अफ भएको पनि बताइन् । उनले बारम्बार आफ्नो छोरी नवरा’जको घरमा आउँदा खो’जी नगरेको र भाई आएर एक साता बस्ता पनि नखोजेको बताइन् ।
युवती र युवतीको भाई समेत आएर आफ्नो घरमा बसिसकेका कारण आफ्नो छोरा पनि दुई जना साथीलाई लिएर युवतीको घरमा जाँदा चैत महिनामा प्रहरी कहाँ बुझाएको आमा’को भनाई छ ।
उनले आफु’हरु आएर बस्न हुने तर मेरो छोरा जाँदा अपमान गरेर प्रहरीलाई बुझाए, त्यसैले म उनीहरुको विवा’हको पक्षमा थिइन् । छोराले पनि त्यसरी साथी लिएर युवतीलाई लिन जाँदा आफुले थाहा नपाएको बताइन् ।
उनले अब आफनो एउटै इ’च्छा आफ्नो छोरा’को सन्तान चाहिने बताइन् । उनले ति युवती बुहारी बनेर आफ्नो घरमा आए आफुले स्वीकार गर्ने पनि बताइन् । त्यो आइ भने म राख्छु, मेरो छो’राको माया हो , तर उ आफु आउन नचा’हे पनि त्यो सन्तान राखि’देओस् । छोराको सन्तान मलाई चाहिन्छ उन’ले भनिन् । भिडियो हेर्नुहोस्…
Prevप्रेमिका लिन गएका नवराजलाई ल’खेट्ने गाउँले यस्तो भन्छन्, स्थलगत रिपोर्टिङ (भिडियोसहित)
Nextनेपालमा आज एकैदिन १५६ जना संक्रमित थपिए, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस् ….
अब एमालेको बैठक छिटो बोलाउँछु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली